နောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်သည်! | These are the Last Days! | Real Conversion
(သမ္မာကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက် ၄ )
ဩဂုတ်လ ( ၃၁) ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဟောကြားသော
သမ္မာကျမ်းစာရှိ ရှင်ပေတရုဒုတိယစောင် အခန်းကြီး ၃ အပိုဒ်ငယ် ၃ ကို ကျေးဇူးပြု၍ ဖွင့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂ပေ ၃း ၃ ကိုဖတ်ရှုကြသည်ဖြစ်၍ အားလုံးမတ်တပ်ရပ်ကြပါစို့။
“ရှေးဦးစွာ သိမှတ်အပ်သောအရာဟူမူကား၊ နောက်ဆုံးသောကာလ၌ ပြက်ယယ် ပြုတတ်သောသူတို့သည်၊ မိမိတို့တပ်မက်ခြင်းအတိုင်းကျင့်နေ၍၊ သခင်ဘုရားကြွ လာမည်ဟူသောဂတိတော်သည် အဘယ်မှာရှိသနည်း။” (၂ပေ ၃း ၃ )
ဒီမနက်တွင် “နောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်သည်” ဟူသောအကြောင်းအရာဖြင့် တရားဟော မည်။ ယခုအချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် နောက်ဆုံးသောကာလတွင် အသက်ရှင်နေကြကြောင်း ကိုပြသသည့် နိမိတ်ပေါင်းများစွာရှိပေသည်။
“နောက်ဆုံးသောကာလ၌” ဟူသော ၂ပေ ၃း ၃ ၏ဖော်ပြချက်ကို သတိပြုပါ။ “နောက် ဆုံးသောကာလ” ဟူသည့်စကားလုံးကို အလေးအနက်ထားပါ။ တမန်တော်ပေါလုက “ နောင် ကာလသည် ခဲယဉ်းသောကာလဖြစ်မည်”(၂ တိ ၃း ၁) ဟုဆိုထားပါသည်။ တမန်တော် ယာကုပ်က “နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ကာလအဘို့ ဘဏ္ဍာကိုဆည်းဖူးကြပါပြီတကား” (ယာကုပ် ၅း ၃ ) ဟုဆိုထားပါသည်။ တမန်တော်ယုဒကလည်း “မိမိတို့မတရားသောတပ်မက် ခြင်းအတိုင်း ကျင့်နေ၍၊ ပြက်ယယ်ပြုတတ်သောသူတို့သည် ပေါ်ကြလိမ့်မည်”(ယုဒ ၁၈ ) ဟု ဆိုထားပါသည်။ ထို့အပြင် တမန်တော်ရှင်ပေါလုကလည်း “နောင်ကာလ၌” တိုးပွါးလာသည့် နတ်ဆိုး၏ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်ခြင်းအကြောင်းကိုသတိပေးထားသည်။ ( ၁တိ ၄း ၁ ) ယေရှုခရစ် ကလည်း နောက်ဆုံးသောကာလအကြောင်းကို ရေလွှမ်းမိုးခြင်းမတိုင်မှီအချိန်ကာလနှင့် နှိုင်း ယှဉ်၍ ပြောဆိုခဲ့သည်။ ခရစ်တော်က “လူသားသည် ကြွလာသောအခါ နောဧလက်ထက်၌ဖြစ် သကဲ့သို့ ဖြစ်လိမ့်မည်” ( မဿဲ ၂၄း ၃၇ ) ဆိုထားပါသည်။
သမ္မာကျမ်းစာက သမိုင်းတွင် နောက်ဆုံးသောကာလဟုသိရှိရသောအချက်တစ်ချက် ရှိကြောင်းသွန်သင်ထားပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာပညာရှင်များစွာက ကျွန်ုပ်တို့သည် နောက်ဆုံး သောနေ့ရက်ကာလတွင် ရောက်ရှိနေကြကြောင်းဆိုကြပါသည်။ ၎င်းသည် မှန်ကန်မည်ဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ နေ့ရက်ကာလသတ်မှတ်ထားခြင်းကို သမ္မာကျမ်းစာက သတိပေးထား သည်။ သို့သော် “နောက်ဆုံးသောကာလ” ဟု သိရှိရသော အချိန်ကာလရှိပေသည်။ “နောက် ဆုံးသောကာလ” သည် ရက်အနည်းငယ်၊ သို့မဟုတ် ရက်သတ္တပါတ်အနည်းငယ် လည်းမဟုတ်ပါ။ “နောက်ဆုံးသောကာလ”ဟူသည်မှာ အဆုံးမတိုင်မှီအချိန်ကာလပင်ဖြစ် သည်။ နိမိတ်လက္ခဏာတိုင်းက ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုနေ့ရက်ကာလတွင်ရှိနေသည်ဟုသော အရာကို ရည်ညွှန်းထားဟန်ရှိသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်တွင် ဗြိတိန်ဧဝံဂေလိဆရာ Leonard Ravenhill က နောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်သည္ ဟုဆိုခဲ့သည်။ မေးစရာမေးခွန်းမှာ အချိန်မည်မျှကြမည်နည်း။ (Leonard Ravenhill, အမေရိကန်သည် ကျရှုံးရန်ငယ်ရွယ်သေး သည်၊ Bethany House Publishers, ၁၉၇၉၊ စာ-၅၀ ) Dr. M. R. DeHaan က “ ကျွန်ုပ်တို့ သည် ပရောဖက်ပြုချက်ပြည့်စုံသည့် နောက်ဆုံးသောကာလတွင် အသက်ရှင်နေကြသည်ကို ယုံကြည်သည်” ဟုဆိုထားသည်။ (M. R. DeHaan, M.D., ယုဒနှင့် ပါလက်စတိုင်းနှင့်ပါတ် သက်၍ပရောဖက်ပြုချက်” ၊ Zondervan Publishing House, ၁၉၇၈၊ စာ ၁၇၀)
“ရှေးဦးစွာ သိမှတ်အပ်သောအရာဟူမူကား၊ နောက်ဆုံးသောကာလ၌ ပြက်ယယ် ပြုတတ်သောသူတို့သည်၊ မိမိတို့တပ်မက်ခြင်းအတိုင်းကျင့်နေ၍၊ (၂ပေ ၃း ၃ )
ဤကျမ်းပိုဒ်တွင်ရှိသောနောက်ထပ်စကားလုံးမှာ “ပြက်ယယ်ပြုတတ်သောသူ” ဖြစ် သည်။ ဤလူများက ခရစ်တော်ဒုတိယအချိန်ကြွလာမည့်အကြောင်းအရာနှင့် လောက၏ နောက်ဆုံးသောအချိန်အကြောင်းကို ပြက်ယယ်ပြုကြသည်။ သူတို့သည် ပြက်ယယ်ပြုရယ် မောကြသည်။ သူတို့သည် မယုံကြည်သူများပင်ဖြစ်ကြပါသည်။ သူတို့သည် ခရစ်တော်ဒုတိယ
အကြိမ်ကြွလာမည့်အယူအဆကို ရယ်မောစရာ လုပ်ကြသည်။ သူတို့က နောက်ဆုံးသောကာ
လအကြောင်းပြောဆိုမှုတစ်စုံတစ်ရာကို ငြင်းဆိုခဲ့ ကြသည်။ သူတို့က ၎င်းကို “ အနှုတ်သ ဘောဆောင်သောအတွေးအခေါ်” ဟုဆိုကြသည်။ ထို့ကြောင့် စိတ်ထဲတွင် မထားကြပေ။
သူတို့သည် အဘယ့်ကြောင့် ပြက်ယယ်ပြုရယ်မောကြသနည်း။ နောက်ထပ်ဆိုသော စကားလုံးမှာ “မိမိတပ်မက်ခြင်းအတိုင်း ကျင့်နေ၍” ဟူ၍ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် တကိုယ် ကောင်ဆန်ဆန်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ အပြစ်ထဲတွင်လည်းကောင်း အသက်ရှင်ကြပါသည်။ ထို့ ကြောင့် သူတို့က ခရစ်တော်ကြွလာရန်အလိုမရှိကြပါ။ သူတို့၏အပြစ်နှင့်ပြည့်နှက်သော အသက်ရှင်မှုဖြင့် ကြားဝင်နှောက်ယှက်ကြသည်။ ဤပြက်ယယ်ပြုခြင်းက သိသာခံစားမှုကို စစ်ဆေးမည်မဟုတ်ပါ။သူတို့သမ္မာကျမ်းစာကိုလည်း မဖတ်ကြပါ။ သူတို့သည် သမ္မာတရားကို သိလိုခြင်းမရှိကြပါ။ အကြောင်းမှာ သူတို့သည် မိမိတပ်မက်ခြင်းအတိုင်းကျင့်နေကြသော ပြက် ယယ်ပြုသူများဖြစ်ကြပေသည်။
ကျွန်ုပ်သည် UCLA ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနားသို့ တချိန်က တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့ရှိခဲ့ကြပေသည်။ ဘွဲ့နှင်းတပင်တရားဒေသနာရှင်က စိုးရိမ် ကြောက်ရွံ့ဖွယ်ရာ ယနေ့ခေတ်လောကကြီး၏အခြေအနေဖြစ်သည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသတိ ပေးထားချက်၊ များပြားလွန်းသောလူဦးရေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းခြင်း၊ သက်ရှိသတ္တဝါလေ့ လာမှုမညီမမျှခြင်း၊ တောပြုန်းခြင်း၊ အဏုမြူပေါက်ကွဲစေသောအရာများကို အီရန်၊ မြောက်ကို ရီးယားနှင့် ပါလက်စတုင်းတို့မှတွေ့ရှိခြင်း၊ ရာပေါင်းများစွာသောအမျိုးအစားများ မျိုးတုန်းခြင်း၊ နှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများတို့နှင့်ပါတ်သက်သော တရားဟောချက်ကို ဟောပြော လေသည်။ သို့သော် သူက “ပျက်စီးခြင်းကြုံတွေ့ရမည်ဟူသောပရောဖက်ပြုချက်ကိုမယုံပါနှင့်၊ ကမ္ဘာကြီးသည် အဆုံးသို့ရောက်မည်မဟုတ်ပါ” ဟုပြောဆိုသည်။ ထိုအရာများမှာ သူ၏တိကျ သောစကားလုံးများပင်ဖြစ်ပါသည်။ သူပြောသည့်စကားများကို စာရွက်ပေါ်တွင်မှတ်သားထား ပြီး အအိတ်ကဒ်ထဲသို့ထည့်လိုက်သည်။ ထိုသို့သောအခြေအနေကို တစ်ခုချင်းစီဖော်ပြပြီး နောက် သူက “ကမ္ဘာကြီးသည် အဆုံးသို့ရောက်မည်မဟုတ်၊ ပျက်စီးခြင်းကြုံတွေ့ရမည်ဟူ သောပရောဖက်ပြုချက်ကိုမယုံပါနှင့်” ဟုဆိုခဲ့သည်။ ကျွုန်ုပ်မကူညီနိူင်သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုသောကျမ်းပိုဒ်ကိုကြည့်ပါ။
“နောက်ဆုံးသောကာလ၌ ပြက်ယယ်ပြုတတ်သောသူတို့သည်…….သခင်ဘုရားကြွ လာတော်မူမည်ဟူသောဂတိတော်သည် အဘယ်မှာရှိသနည်း။” (၂ပေ ၃း ၃-၄ )
ထိုဘွဲ့နှင်းသဘင်တရားဟောဆရာက“လောကကြီးသည်အဆုံးသို့ရောက်မည်မဟုတ်” ဟု ပြောခဲ့ပါသည်။ ၁၉၆၅ခုနှစ်တွင် သီကုံးရေးစပ်သော McGuire တေးသီချင်းက “ ကျွန်ုပ်တို့ သည်ပျက်စီးခြင်းအကြိုတွင်ရောက်နေသည်ကို သင်မသိရှိ” ဟုဆိုပါသည်။ ၎င်းကို ကျွန်ုပ်ယုံ ကြည်ခဲ့သလို ယခုလည်းယုံကြည်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲမတိုင်ခင် ကတည်း က “နောက်ဆုံးသောကာလ”တွင်ရှိနေကြပေသည်။ ဣသရေလတိုင်းနိူင်ငံသည် ၁၉၄၈ခုနှစ် တွင်မွေးဖွါးခဲ့သည်။ ကွန်မြူနစ်များက တရုတ်ပြည်ကို ၁၉၄၉ခုနှစ်တွင် သိမ်းပိုတ်ခဲ့ကြသည်။ အေးသောစစ်ပွဲသည် ၁၉၅ဝခုနှစ်တွင် အဏုမြူ၏အဆုံးသတ်အခြေအနေကို တစတစဖြင့် ရောက်ရှိလာပေသည်။ သမ္မတ ကနေဒီအား ခေါင်းဆောင်က ၁၉၆၃တွင် လုပ်ကြံခဲ့သည်။ Malcolm X လည်းလုပ်ကြံခံရသည်။ ထို့နောက် Dr. Martin Luther King လည်း လုပ်ကြံခံရ ပါသည်။ Bobby Kennedy လည်းလုပ်ကြံခံရသည်။ ထို့နောက် ရော့ခ်တေးဂီတ၊ နှင့် မူယစ် ဆေးဝါးများသည် မျိုးဆက်တစ်ခုလုံး၏စိတ်ထဲတွင် စွဲထင်နေပေသည်။ အရာအားလုံးသည် လုံး ၀ပြောင်းလဲလျက်ရှိပေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဓလေ့ထုံးတမ်စဉ်လာများပင်လျှင် ပြိုကျပျက်စီး နေပေသည်။ Leonard Ravenhill မှတ်ချက်ပြုသကဲ့သို့ “နောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်သည်၊ မေးခွန်းမှာ မည်မျှကြာညောင်မည်နည်း” ဟူ၍ဖြစ်သည်။
တပည့်တော်များက ကမ္ဘာကြီး၏အဆုံး၊ ဤကာလ၏အဆုံးကို သိရှိလိုခဲ့ကြပါသည်။ ခရစ်တော်အား နောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလ၏ အတိတ်နိမိတ်ကိုပြသရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြ သည်။ ခရစ်တော်က မဿဲ ၂၄ တွင်တွေ့ရှိရသောနိမိတ်များစွာကိုပေးတော်မူပြီး ၎င်းနှင့်တူညီ သောကျမ်းပိုဒ်မှာ လုကာ ၂၁ ပင်ဖြစ်သည်။ မဿဲ ၂၄ က ခရစ်တော်ဖြေကြားချက်တစ်ချို့ကို ဖော်ပြသည်။ ထို့ပြင် လုကာ ၂၁ ကမူ ပို၍များလှစွာသောနိမိတ်အကြောင်းကို ဖော်ပြပါသည်။ ဒီမနက်တွင် လုကာ ၂၁ တွင် ခရစ်တော်ပေးထားသည့် နိမိတ်အကြောင်းကို အဓိကထားဖော် ပြလိုပါသည်။ “ ကိုယ်တော်သည် ကြွလာ၍ ဤကပ်ကမ္ဘာကုန်သောပုပ္ပနိမိတ်သည် အဘယ်နိ မိတ်ဖြစ်မည်ကို၎င်းမိန့်တော်မူပါ။” (မဿဲ ၂၄း ၃ ) ယေရှုကို ထိုမေးခွန်းနှင့်ပါတ်သက်၍ ရှင်လု ကာ ၂၁ တွင် များစွာသောအဖြေကိုပေးတော်မူခဲ့သည်။
“အရပ်ရပ်တို့၌ကြီးစွာသောမြေလှုပ်ခြင်း၊ အစာခေါင်းပါးုခြင်း၊ကာလနာများပြားခြင်း၊ တို့သည် ဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ မိုဃ်းကောင်းကင်၌လည်း ကြောက်မက်ဖွယ်သောအရာ နှင့်ကြီးစွာသော ပုပ္ပနိမိတ်တို့သည် ပေါ်ထွန်းကြလိမ့်မည်။ထိုအခါ၊ နေ၊လ၊ ကြယ် နက္ခတ်တို့၌ ပုပ္ပနိမိတ်ထင်ရှားလိမ့်မည်။ မြေကြီးပေါ်မှာလည်းလူအမျိုးမျိုးမငြိမ်မ သက်စိုးရိမ်ကြောင့်ကြခြင်း၊ သမုဒ္ဒရာလှိုင်းတံပိုးကြီးခြင်း၊ မြေကြီးပေါ်မှာဖြစ်လတံ့ သောဘေးများကိုမြော်၍ ကြောက်လန့်သဖြင့်၊ လူများတို့၏အသက်ဆုံးခြင်းအမှုအ ရာတို့သည့်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်။” ( လုကာ ၂၁း ၁၁၊ ၂၅-၂၆ )
ဤအရာကို စဉ်းစားဆင်ခြင်ပါ။ ယေရှုက “လောက၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများ”က်ိုမြင်တွေ့ရပါမူ လူ၏နှလုံးသားသည် ကျဆုံးပေလိမ့်မည်။ လောကတွင်ဖြစ်ပျက်သောအရာများကြောင့် အစာ ခေါင်းပါးခြင်း၊ ကာလနာများပြားခြင်းများဖြစ်ပျက်ကြောင်းမိန့်တော်မူခဲ့သည်။
“ မြေကြီးပေါ်မှာဖြစ်လတံ့သောဘေးများကိုမြော်ကြည့်၍” ( လုကာ ၂၁း ၂၆ )
သင်သည် မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းအရည်ပျော်ဝင်သည်ကို ကြည်သောအခါ ရာသီဥတု၏ထိ ခိုက်မှုသည် ပြောင်းလဲပေသည်။ ကြောက်မက်ဖွယ်ရာလည်းဖြစ်သည်။ အေအိုင်တီကူးစက် ရောဂါက အာဖရိကတိုက်ကို အဆုံးမရှိ ဖျက်ဆီးသည်ကို သတိပြုမည့်သောအခါ ၎င်းသည် ကြောက်မက်ဖွယ်ရာပင်ဖြစ်သည်။ သင်သည် တီဘီရောဂါ၊နှင့် အီဘိုလာရောဂါတည်းဟူသော ရောဂါသစ်များကာကွယ်သည့် ပဋိဇီ၀ဆေးနှင့် ထင်မှတ်ထားသောမူးယစ်ဆေးဝါးကို တုန့်ပြန်မှု မရှိသော ကမ္ဘာအနှံဖြစ်ပွါးသောရောဂါများကိုကြည့်ရှုသောအခါ ကြောက်ရွံ့လာပေလိမ့်မည်။
လူငယ်လူရွယ်အများစုသည် အနာဂတ်နှင့်ပါတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိသည်မှာ အံ့ဩ စရာမဟုတ်ပေ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်များ၏ ဂ၀ ရာခိုင်နှုန်းက သူတို့အနာဂတ်ကောင်းပိုင် ဆိုင်ထားသည်ကိုမတွေးထင်မိကြကြောင်း မကြာသေးမှီက ကောက်ထားသောစစ်တမ်းက ဖော်ပြထားပါသည်။ ၎င်းက လူငယ်များသည် သူတို့အနာဂတ်ပြဿနာများအတွက် စိုးရိမ်ပူပန် မှုများရှိနေကြကြောင်းကို ပြသပေသည်။
ထို့အပြင် ဂဟေဗေဒအရ ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသော ကြောက်မက်ဖွယ်ရာပြဿနာ များကို နေ့စဉ်သတင်းစာများတွင် ဖော်ပြလေ့ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသကဲ့သို့ ၎င်းတို့သည် လောကကြီး၏အဆုံးနှင့် ခရစ်တော်ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းသည် အလွန်ပင်နီး စပ်နေကြောင်း ပုပ္ပနိမိတ်များပင်ဖြစ်ကြပါသည်။
၂။ ဒုတိယအချက်- လူမျိုးနှင့်ဆိုင်သောနိမိတ်လက္ခဏာများရှိသည်။
လူများစွာတို့သည် ဂျူးနှင့် ဣသရေလလူမျိုးများကို မုန်းတီးနေကြသည်။ နယူး ယောက်ရှိမြို့တော်ပြဇာတ်သည် “Klinghoffer ၏သေခြင်း”ဟုအမည်ရသော ပြဇာတ်ကိုတင်ပြ ရန်ပြင်ဆင်နေသည်။ ၎င်းသည် ပါလက်စတိုင်းအကြမ်းဖက်သမားသည် အသက် ၆၉ နှစ်အ ရွယ်ဂျူးအဖိုးအိုတစ်ယောက်ကို ၎င်း၏လူနာထိုင်ဘီးတပ်ကုလားထိုင်တွင် သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်း ပြသသည်။ ၎င်းက အကြမ်းဖက်သမားသည် ဤအကူအညီမရှိသည် အဖိုးကြီးကို သတ်ဖြတ် ခွင့်ရသောသူအဖြစ် ပြသပါသည်။ အဓိက အကြမ်းဖက်သမားများက “ဆင်းရဲသောအဖိုးကြီး များစုဝေးသည့်နေရာတိုင်းတွင် ၀ဖြိုးသောဂျူးလူမျိုးကိုရှာဖွေနိူင်သည်။ သင်လှည့်ဖြားသည့် ရိုးစင်ပြီး နာမည်ပျက်သောသူများကို မည်သို့လှည်ဖြားမည်ကို သင်သိပါသည်၊ အမေရိကန် သည် အကြီးမားဆုံးသောဂျူးဖြစ်သည်” ဟု သီချင်းဆိုကြပါ သည်။ သင်သည် Peter Gelb ထံ သို့ pgelb@metopera.org အီးမေးလ်ရေးသားခြင်းဖြင့် ကန့်ကွက်တားဆီးရန် တိုက်တွန်းလို ပါ၏။ Mr. Gelb သည် နယူးယောက်မြို့ပြဇာတ်အဖွဲ့၏ မန်နေဂျာပင်ဖြစ်ပါသည်။ သူ့အား ဖုန်း ဆက်ပြီး “Klinghoffer ၏သေခြင်း” ပြဇာတ်ကို ပြန်ဖျက်ရန် တောင်းဆိုလိုက်ပါ။ (Jewish Standard မှ ထုတ်နှုတ်သောသတင်းများ၊ ဩဂုတ်လ ၁၉၊ ၂၀၁၄ ) ဂျူးလူမျိုးများအားမုန်းတီး ခြင်းသည် ယနေ့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ဖြစ်ပျက်နေသောပြဿနာပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုက ဤ သို့မိန့်တော်မူခဲ့သည်။
“ယေရုရှလင်မြို့ကို ဗိုလ်ခြေများဝန်းရံလျက်ရှိသည်ကို သင်တို့မြင်သောအခါ၊ ထိုမြို့ သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက်လုသည်ကို သိမှတ်ကြလော့။” ( လုကာ ၂၁း ၂၀ )
ဂျူးလူမျိုးများအပေါ်မုန်းတီးမှုသည် နောက်ဆုံးသောကာလတွင် ကြီးထွားလာပြီး တပါးအမျိုး သား ရန်သူများသည် ဣသရေလနိူင်ငံကို ဆန့်ကျင်ပြီး ဂျူးများကိုဖျက်သိမ်းရန်ကြိုးစားလာကြ သည်။ ဟစ်တလာသည် ဂျူးလူမျိုးမျာကို အမြစ်ပြတ်အောင်ခြေမှုန်းသုတ်သင်ရန်ကြိုးစားခဲ့လေ သည်။ သို့သော် သူသည် ကျဆုံးခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာ ဂျူးလူမျိုးများသည် လောကတွင်ရှိကြ သည့် ဘုရားသခင်ရွေးကောက်ထားသောလူမျိုးပင်ဖြစ်ပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက ဤသို့ဆို ထားပါသည်။
“ဘိုးဘေးများအကြောင်းကြောင့် ချစ်သူဖြစ်ကြသည်။” ( ရောမ ၁၁း ၂၈ )
သမ္မာကျမ်းစာကိုလက်ခံယုံကြည်သောနှစ်ခြင်းများမှာ ဣသရေလလူမျိုးများကို ကူညီ ထောက်ခံသောသူများဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဂျူးလူမျိုးများနှင့် ဣသရေလနိူင်ငံနှင့်အ တူဆက်လက်ရပ်တည်ရပေမည်။ သို့သော် သမ္မာကျမ်းစာက နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ကာလ တွင် မယုံကြည်သောလောကကြီးသည် ဂျူးတို့တဖက်တွင် ရပ်တည်မည်အကြောင်းဆိုထား ပါသည်။ ဤသို့ဆိုထားသည်။
“လောကီသားအမျိုးမျိုးတို့သည် ယေရုရှလင်မြို့တဘက်၌စုဝေးလျက်ရှိကြ၏။” ( ဇာခရိ ၁၂း ၃ )
ထိုအမှုအရာမှာ အခုအချိန်တွင်ဖြစ်ပျက်နေသောအရာပင်ဖြစ်ပေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤကာ လ၏နောက်ဆုံးသောအချိန်တွင် အသက်ရှင်နေကြကြောင်း နိမိတ်လက္ခဏာပင်ဖြစ်ပါသည်။ ခရစ်ယာန်တို့သည်“နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်”ကာလ၏ကြီးထွားလာသောမှောင်မိုက်ထဲတွင်ပင် လျှင် ဣသရေလနှင့် ဂျူးလူမျိုးများဘက်တွင် ဆက်လက်ရပ်တည်သင့်ပေသည်။
၃။ တတိယအချက်- ဘာသာရေးနိမိတ်လက္ခဏာ၊ မှားယွင်းသောဘာသာ ရေးတွင်ရှိသော လှည့်ဖြားခြင်းနိမိတ်လက္ခဏာ
“သင်တို့သည် လှည့်ဖြားခြင်းသို့မလိုက်မပါမည်အကြောင်း သတိပြုကြလော့။ အများ သောသူတို့က၊ ငါသည် ဤမည်သောသူဖြစ်၏။ အချိန်ကာလလည်းရောက်လာပြီဟု ဆိုလျက် ငါ၏အယောင်ကိုဆောင်၍ပေါ်လာကြလိမ့်မည်။ထိုသူတို့နောက်သို့မလိုက် ကြနှင့်။” ( လုကာ ၂၁း၈ )
“ခရစ်တော်၏အယောင်ကိုဆောင်သောသူနှင့်မိစ္ဆာပရောဖက်တို့သည်ပေါ်လာ၍ရွေးချယ်သောသူတို့ကိုပင်လှည့်ဖြားနိူင်လျှင်လှည့်ဖြားလောက်အောင် ကြီးစွာသော နိမိတ်လက္ခဏာ၊ အံ့ဘွယ်သောအမှုတို့ကိုပြုကြလိမ့်မည်။” ( မဿဲ ၂၄း ၂၄ )
TBN တွင်တွေ့ရသမျှသောအရာများသည် လှည့်ဖြားခြင်းများသာဖြစ်ပါသည်။ ဧဝံဂေလိအစီအ စဉ်များစွာတို့သည် လှည့်ဖြားခြင်းနှင့် ရှုတ်ထွေးစေသောအရာများသာဖြစ်ပါသည်။ တမန်တော် ရှင်ပေါလုက ဤသို့ဆိုပေသည်။
“နောင်ကာလ၌လူတို့သည် စင်ကြယ်သောဩဝါဒကို နာမခံနိူင်ဘဲ၊ ယားတတ်သော နားရှိလျှင်၊ မိမိတပ်မက်ခြင်းအတိုင်း များပြားသောဆရာတို့နောက်သို့လိုက်ကြလိမ့် မည်။”
( ၂ တိ ၄း ၃ )
၄။ စတုတ္ထအချက်- ခရစ်ယာန်များကို ညှင်းပန်းနှိပ်စက်သည့် နိမိတ်
ခရစ်ယာန်များအပေါ်ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းသည် ကမ္ဘာနှင့်အဝှမ်းဖြစ်ပေါ်နေသောအ ရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ တရုတ်ပြည်တွင်ရှိကြသည့် စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်များသည် မြေအောက် “အိမ်အသင်းတော်များ” တွင် တွေ့ဆုံကြသည်။ တရုတ်ခရစ်ယာန်ရာပေါင်းများစွာ တို့သည် သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကြောင့် အထူးသဖြင့် ထုံးတမ်းဓလေ့ပြောင်းအလဲလုပ်သည့်အခါ တွင် အချုပ်ခံကြရသည်။ မွတ်စလင်ဂျက်ဟာစစ်၏တင်ပြချက်တွင် နေ့တိုင်းလိုလိုပင် ခရစ်ယာန်များသတ်ဖြတ်ခံရသည်ဟူသောသတင်းပါလာပေသည်။ ယေရှုက ယနေ့ဖြစ်ပျက် လျက်ရှိသည့် တကမ္ဘာလုံး၌ ခရစ်ယာန်များညှင်းပန်းနှိပ်စက်ကြမည်အကြောင်းကို မိန့်ဆိုထား ခဲ့ပါသည်။ ယေရှုက ဤသို့ဆိုထားသည်။
“သင်တို့ကိုဖမ်းဆီးညှင်းဆဲ၍၊ တရားစရပ်၌၎င်း၊ ထောင်ထဲ၌၎င်း အပ်နှံကြ လိမ့်မည်။” ( လုကာ ၂၁း ၁၂ )
ထို့နောက် ခရစ်တော်က မပြောင်းလဲသောမိဘများနှင့် ဆွေမျိုးများတို့က စစ်မှန်သောခရစ် ယာန်များဖြစ်လာကြသည် သူတို့၏သားသမီးများကိုလည်း ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ကြလိမ့်မည်။ မွတ်စလင်လူငယ်တစ်ယောက်သည် စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်ဖြစ်လာသောအခါ ထိုသို့ မကြာ ခဏဖြစ်လေ့ရှိပေသည်။ သို့ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုကဲ့သို့ ထပ်ခါထပ်ခါ ဖြစ်ပျက်သည်ကို တွေ့မြင်ခဲ့ကြပါသည်။ ခရစ်တော်က ဤသို့ဆိုထားပါသည်။
“သင်တို့မိဘ၊ ညီအစ်ကို၊ ပေါက်ဘော်၊ အဆွေခင်ပွန်းတို့သည် သင်တို့ကို အပ်နှံကြလိမ့်မည်။ အချို့တို့ကိုလည်း သတ်ကြလိမ့်မည်။ လူအပေါင်းတို့ သည်လည်း ငါ၏နာမကြောင့် သင်တို့ကို မုန်းကြလိမ့်မည်။” ( လုကာ ၂၁း ၁၆-၁၇ )
ဆုံးရှုံးမှုကိုရေတွက်ပါ။ သင်သည် စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်တစ်ယောက်မဟုတ်ခဲ့လျှင် မည်သူမျှ နှစ်သက်ကြမည်မဟုတ်ပါ။ လူတိုင်းသင့်ကို ဆန့်ကျင်နေကြပေလိမ့်မည်။ ဤမှောင်မိုက်ကာလ တွင် စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်လာစေရန် တစ်ခုခုကို စွန့်လွှတ်ရမည်။ ထိုအရာမှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် နောက်ဆုံးသောကာလတွင် အသက်ရှင်နေကြကြောင်း နိမိတ်လက္ခဏာပင် ဖြစ်ပါသည်။
၅။ ပဥ္စမအချက်- စိတ်ပညာဆိုင်ရာနိမိတ်လက္ခဏာ။
“ သင်တို့သည် ကုယ်ကိုကိုယ်သတိပြုကြလော့။ သို့မဟုတ အစားအ သောက်လွန်ကျူးခြင်း၊ လောကီစိုးရိမ်ခြင်းအားဖြင့် စိတ်လှလုံးပင်ပန်းလျက် နေစဉ်တွင်၊ ထိုနေ့ရက်သည် အမှတ်တမဲ့သင်တို့နှင့် တွေ့ကြုံလိမ့်မည်။ ထို နေ့ရက်သည် ပိုက်ကွန်ကဲ့သို့ မြေတပြင်လုံး၌နေသောလူအပေါင်းတို့ကို အုပ်မိလိမ့်မည်။” (လုကာ ၂၁း ၃၄-၃၅ )
ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်ကို လာပါဝင်တဲ့လူငယ်တစ်ဦးက “နောက်တစ်ပတ်ဆို ရင်လာနိူင်မှာမဟုတ်ဘူး၊ ကျွန်ုပ်အဒေါ်ပြောင်းတာကို ကူညီရမယ်” ဟုဆိုပါသည်။ သူသည် ခြောက်ရက်လုံးလုံးအလုပ်လုပ်ရန်ရှိသော်လည်း တနင်္ဂနွေမနက်ပိုင်းတွင်သာ လုပ်ဆောင်မည် ဖြစ်သည်။ သူသည် လေးလံသောဘ၀ပြဿနာနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။ များစွာသောလူတို့သည် ပေါ့ပါးပြီး အကျိုးမရှိသည့်အကြောင်းတရားများကြောင့် ဘုရားကျောင်းပျက်ကွက်ကြပေသည်။ သူတို့သည်ဘ၀ပြဿနာများဖြင့် ရင်ဆိုင်နေကြရသည်။ ထို့အပြင် အမှတ်တမဲ့နေနေသောအ ချိန်တွင် တရားစီရင်ခြင်းသည် သူတို့အပေါ်ကျရောက်လာလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်၏တရားစီရင် ခြင်းကျရောက်လာသောအခါတွင် သူတို့သည် ပြင်ဆင်ခြင်းကို ပြုကြမည်မဟုတ်။
သင်သည် မူးယစ်ဆေးဝါး၊နှင့် ကာမဆက်ဆံခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်သော်လည်း သင့်အား စုတ်ယူနေသော “ဤဘ၀၏လိုအပ်ချက်များ”အောက်တွင် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်မှုက ဖိနှိပ်နေပေသည်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းတွင် ထိုသို့သောသူများကို ကျွန်ုပ်တွေ့ကြုံခဲ့ဖူးသည်။
“ထို့ကြောင့် သင်တို့သည် ဖြစ်လတံ့သောအမှုအရာတို့နှင့် ကင်းလွတ်၍ လူသားထံသို့ရောက်ခြင်းကို ခံထိုက်သောသူဖြစ်သည်ဟု မှတ်တော်မူမည် အကြောင်း၊ အစဉ်ဆုတောင်းလျက်စောင့်နေကြလော့။” ( လုကာ ၂၁း ၃၆ )
ထို့ကြောင့် ယင်းမှာ နောက်ဆုံးသောကာလနှင့် ကျရောက်လာမည့်တရားစီရင်ခြင်းအတွက် လုအပ်သော သင်၏ပြင်ဆင်မှုပင်ဖြစ်ပါသည်။ သင်လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာနှစ်ခုရှိပါသည်။
၁။ ဘုရားကျောင်းသို့ပြန်လာပါ။ သင်ဘုရားကျောင်းသို့ပြန်မလာလျှင် ိပေ။ ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိူင်သောအရာမရှ
၂။ ခရစ်တော်ထံပါးသို့ပြန်လာပါ။ သင့်အပြစ်အတွက်ပေးဆပ်ရန် သူအသေ ခံတော်မူခဲ့သည်။ သူသည် သေခြင်းမှ ခန္ဓာကိုယ်ဖြင့်အမှန်တကယ်ထ မြောက်တော်မူခဲ့သည်။ သူသည် နေတော်မူသည်။ သူသည် ထိုအရပ်၌ သင့်အတွက် ရှိနေပါသည်။ သင် သည် ခရစ်တော်ထံပါးသို့ချဉ်းကပ်ပါ။ သင်၏အပြစ်များကို သူ၏အေသွး တော်ဖြင့်ဆေးကြောတော်မူမည်။
၆။ ဆဌမအချက်- ခရစ်ယာန်မေတ္တာမရှိသော အသင်းတော်များ၏နိမိတ်
တပည့်တော်များက ခရစ်တော်အား ဤသို့မေးကြသည်။
“ကိုယ်တော်သည် ကြွလာ၍ ဤကပ်ကမ္ဘာကုန်သော ပုပ္ပနိမိတ်သည် အဘယ်နိမိတ်ဖြစ်မည်ကို၎င်း၊ အမိန့်တော်ရှိပါ” ( မဿဲ ၂၄း ၃ )
မဿဲ ၂၄ တွင် ခရစ်တော်ပေးထားသည့် နိမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုမှာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအသင်း တော်များတွင် ပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်အတွက် စစ်မှန်သောမေတ္တာတရားမရှိခြင်းကြောင့်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ သနားခြင်း၊ မိတ်ဆွေဖြစ်ခြင်း၊နှင့်မေတ္တာမရှိသည်မှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာပင်ဖြစ် သည်။ ကပ်ကမ္ဘာအဆုံးနှင့် ကြွလာတော်မူမည်အကြောင်း နှင့်ဆိုင်သောနိမိတ်ကို ခရစ်တော် အားတောင်းကြသောအခါ ခရစ်တော်က ဤသို့ဆို ထားသည်။
“မတရားသောအမှုတို့သည်များပြားသဖြင့် အများသောသူတို့၏ချစ်ခြင်း မေတ္တာသည် ခေါင်းပါးလိမ့်မည်။” (မဿဲ ၂၄း ၁၂ )
ယနေ့ခေတ်အသင်းတော်အများစုသည် လာရောက်လေ့လာသောသူတို့အား ဧည့်ဝတ် ပြုရာတွင် အေးစက်လျက်ရှိကြသည်။ ၎င်းမှာ သင်သည် သူတို့အသင်းတော်တစ်ခုခုသို့သွား သည့်အချိန်တွင် ခဲယဉ်းစေလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်ကူမပါစေသော်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းတော် သည် ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော် တန်ခိုးမရှိလျှင် သူတို့ကဲ့သို့ပင် ရင်းနှီးပြီးချစ်တတ်မည်မ ဟုတ်ပါ။
“အများသောသူတို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ခေါင်းပါးလိမ့်မည်။” (မဿဲ ၂၄း ၁၂)
ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက်တော်မရှိသောအသင်းတော်သည် ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များ အတွက်မေတ္တာလည်းထားရှိမည်မဟုတ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိသောအသင်းတော်သည် သေ သောအသင်းတော်ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့သည် တံခါးမည်မျှပင်ခေါက်ကြပါစေ၊ ဘစ်စကားမည်မျှ ပင်စီးနင်းသွားကြပါစေ၊ ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်းမည်မျှပင်ပြုလုပ်စေကာမူ သေနေသောအသင်းတော် သာဖြစ်ပါသည်။ ခရစ်ယာန်မည်သည်မှာ မေတ္တာထားတတ်သော်လည်း ထိုသို့မရှိသောကြောင့် သူတို့သည် သေသောအသင်းတော်များဖြစ်ကြပါသည်။
“နောက်ဆုံးသောကာလ”တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းတော်သည် မေတ္တာမရှိသောအ သင်းတော်မဖြစ်စေခြင်းငှါ ဘုရားသခင်ကယ်မတော်မူပါစေသော်။ အလည်အပတ်လာသောသူ တိုင်းကို မင်းသားကဲ့သို့ပြုစုပြီး လအနည်းငယ်လာရောက်ပါဝင်သောသူများကို ဘုရင်ကဲ့သို့ ဆက်ဆံသင့်ပါသည်။ ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းတော်ကို ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်း မေတ္တာနှင့်လွှမ်းခြုံထားသောအသင်းတော်ဖြစ်စေရန် ဆုတောင်းသင့်ပါသည်။ သို့မဟုတ်လျှင် တစ်နေ့တွင် ဤသို့ပြောဆိုခံရပါလိမ့်မည်။
“သင်သည်အသက်ရှင်ဟန်ရှိသော်လည်း သေလျက်နေသည်ကို ငါသိ၏။” ( ဗျာ ၃း ၁ )
ဤအပတ်တွင် ပျောက်ဆုံးသူများကို စိတ်အားထက်သန်စွာဖြင့်လိုက်ကြပါစို့။ ဗုဒ္ဓဟူး နှင့် ကြာသပတေးည ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်းတွင် နာမည်စာရင်းများကို ယူလာပါ။ သို့မှသာ အသင်း တော်သို့လာရောက်ပါဝင်ကြရန် သူတို့အားဖုန်းဆက်ခေါ်ဖိတ်ပါမည်။ ထို့ပြင် မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်သည့်အချိန်တွင်လည်း နာမည်များများယူလာခဲ့ပါ။ ဖုန်းနံပါတ် လိပ်စာများကို များများယူလာပါ။ သူတို့အားတွန်းအားပေးပြီး ဘုရားကျောင်းသို့လာ၍ ဘုရား သခင်၏ဧဝံဂေလိသတင်းစကားနာထောင်ရန် ပြုစုမည်။
ထိုအရာမှာ ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်း၏အစခြေလှမ်းပင်ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် အသင်း တော်သို့နောက်ဆုံးရောက်လာကြသောအခါ သူတို့အား ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်သို့ ရောက်ရှိလာကြပြည့်ပြည့်၀ဝကူညီရမည်။ ဝတ်ပြုခြင်းအစီအစဉ်အပြီးတွင် သူတို့အား ထိုနည်း အတိုင်မထားလိုက်ပါနှင့်။ ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်တွက် အကူအညီတွေရရှိစေရန် မျက်လုံးအစုံ ကိုဖွင့်၍ကြည့်ရှုပါ။ သူတို့အပေါ်ဘုရားသခင်၏မေတ္တာကိုပြသနိူင်ရန် ဘုရားသခင်ထံ ကြိုးစားရှိတေင်းပါ။
မျှော်လင့်ခြင်းလုံးဝမရှိသောသူများအဖို့ ထိုနေ့ရက်သည် ခက်ခဲပြီး ကြောက်မက်ဖွယ် နေ့ရက်ပင်ဖြစ်သည်။ သင်သည် ခရစ်တော်ထံသို့လာ၍ သင်၏ကိုယ်စားလက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အသေခံတော်မူသောအသွေးတော်အားဖြင့် အပြစ်ခွင့်လွှတ်တော်မူရန်ဆုတောင်းပဌနာပြုရ မည်။ သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ငြိမ်သက်ခြင်းကိုရရှိနိုင်ရန်ဆုတောင်းပါ။ ဘုရား သခင်၏သားတော်ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကို ပိုမိုသိရှိရန်အတွက် နောက်တစ်ပတ်တွင်လည်း ဘုရားကျောင်းသို့ပြန်လာရန် ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပဌနာပြုပါ၏။ Dr. Chan ၊ကျေးဇူးပြုပြီးဆုတောင်းဦးဆောင်ပါ။ အာမင်…….။
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ ကျမ်းစာဖတ်ကြားခြင်းကို Mr. Abel Prudhomme ကဆောင်ရွက်သည်။ ၂ပေ ၃း ၃-၉
“ပျက်စီးခြင်းအကြို” (Barry McGuire ၁၉၆၅ )/ “ဤသို့သောအချိန်ကာလတွင်” (Ruth Caye Jones ၊ ၁၉၀၂-၁၉၇၂ )
“ရှေးဦးစွာ သိမှတ်အပ်သောအရာဟူမူကား၊ နောက်ဆုံးသောကာလ၌ ပြက်ယယ် ပြုတတ်သောသူတို့သည်၊ မိမိတို့တပ်မက်ခြင်းအတိုင်းကျင့်နေ ၍၊သခင်ဘုရားကြွ လာမည်ဟူသောဂတိတော်သည် အဘယ်မှာရှိသ နည်း။” (၂ပေ ၃း ၃ )
(၂ တိ ၃း ၁၊ ယာကုပ် ၅း ၃၊ ယုဒ ၁၈၊ ၁ တိ ၄း ၁၊ မဿဲ ၂၄း၃၇၊၃ )
နိမိတ်လက္ခဏာများစွာက အချိန်ကာလနီးကပ်လာကြောင်းပြသသည်ဖြစ်၍ သူတို့သည် မှားယွင်းကြပေသည်။
၁။ ပထမအချက်-သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ဆိုင်သောနိမိတ်များ။ လုကာ ၂၁း၁၁၊၂၅-၂၆
၂။ ဒုတိယအချက်- လူမျိုးနှင့်ဆိုင်သောနိမိတ်များ။ လုကာ ၂၁း ၂၀၊ ရောမ ၁၁း ၂၈၊ ဇာခရိ ၁၂း ၃
၃။ တတိယအချက်- မှားယွင်းသောဘာသာတရားဆိုင်ရာနိမိတ်များ။ လုကာ ၂၁း ၈၊ မဿဲ ၂၄း ၂၄၊ ၂ တိမော ၄း ၃
၄။ စတုတ္ထအချက်- ခရစ်ယာန်များညှင်းပန်းနှိပ်စက်သည့်နိမိတ်များ။ လုကာ ၂၁း ၁၂၊ ၁၆-၁၇
၅။ ပဥ္စမအချက်- စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနိမိတ်များ။ လုကာ ၂၁း ၃၄-၃၅၊ ၃၆
၆။ ဆဌမအချက်- ခရစ်ယာန်မေတ္တာမရှိသော အသင်းတော်များနိမိတ်။ မဿဲ ၂၄း၃၊ ၁၂၊ ဗျာဒိတ် ၃း ၁